Fidinan'ny Praiminisitra tany amin'ny kaomina ambanivohitra Mahazoarivo distrikan'Isandra | Primature
Fidinan’ny Praiminisitra tany amin’ny kaomina ambanivohitra Mahazoarivo distrikan’Isandra
Mahazoarivo, ny 27 desambra 2019 –
Nihaona tamin’ny vahoakan’ny kaomina ambanivohitra Mahazoarivo ao amin’ny distrikan’Isandra, Faritra Matsiatra Ambony, ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, androany maraina ary nanatanteraka dinika arak’asa tao an-tampon’ny tanànan’i Fianarantsoa ny tolakandro, niarahana tamin’ ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny misy any an-toerana, na avy amin’ny fanjakana izany na avy amin’ny sehatra tsy miankina, ny fiarahamonim-pirenena, ireo olom-boafidy sy ray aman-dreny any an-toerana. Niompana tanteraka amin’ny ny fandriampahalemana sy ny fifanankalozana mifandraika amin’ny fiainam-pirenena sy ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana ny anton-dia.
Nanambara ny Praiminisitra fa zava-dehibe loatra amin’ny fitondram-panjakana ny fametrahana ho laharam-pahamehana eto amin’ny firenena ny fandriampahalemana. Matetika hoy izy rehefa hisy fifidianana dia milokaloka ny amin’ny vina fampandrosoana entiny ireo olona milatsaka hofidiana, ary ny zavatra maharary amin’ny vahoaka no resahiny amin’izany, ohatra ny resaka filaminana. Saingy rehefa lany izy ireo dia zary toa fampanantenàna poak’aty no natao tamin’ny vahoaka. Tsy mba toy izay kosa hoy ihany ny Praiminisitra ny ataon’izao fitondrana tarihin’ny Filoha Rajoelina izao fa vaindohan-draharaha ny famerenana ny filaminana sy ny fandriampahalemana, ary nomarihiny fa olana iainan’ireo distrika ao anatin’ny Faritra Matsiatra Ambony io resaka tsy fandriampahalemana io. Araka izany dia velom-panontaniana ny amin’ny mahatonga ny tsy filaminana ny Praiminisitra ka nilaza fa raha zohiana dia ny fitiavan-tena, ny fialonana, ny tandrevaka amin’ny asa, ary ny kolikoly no anton’izany. Mampitsanga-menatra ny Faritra izany toe-javatra izany hoy izy ary manapotika ny soatoavina Malagasy, ka notsiahiviny ny andraikitry ny tsirairay ary nanentana ny amin’ny hametrahana fanamby hanoherana ny tsy fandriampahalemana ny tenany.
Nanolotra vahaolana hanatrarana ny fanamby ny Praiminisitra, ka ny voalohany amin’izany dia ny fialàna amin’ny kolikoly izay mahakasika ny sampan-draharaham-panjakana rehetra, ny lafin-tany, ny mpitandro ny filaminana, ary ny fitsaràna. Notsipihiny fa tsy tokony hahilika amin’ireo rafitra mpanara-maso ny kolikoly ny andraikitra fa ny olon-drehetra dia tompon’andraikitra avokoa. Noraisiny ho ohatra nanazavàna io resaka andraikitra io ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana any amin’ny dahalo ka nanontaniany hoe tamin’ny an-tanan-tohotra inona avy no nandalovan’ny famoahana izany fitaovana izany. Ary ambonin’izay dia mora mivoaka ny fonja ireo dahalo voasambotra.
Ankehitriny hoy ny Praiminisitra dia efa apetraky ny fitondram-panjakana ny lamina rehetra hanaraha-maso ireo kizo sy faritra mena, saingy adidintsika ny mifanentana amin’ny fandraisana andraikitra sy ny fanekena izany lamina napetraka izany satria tsy ho tomombana ireo fepetra vaovao napetraka raha tsy miverina ny fifampitokisana eo amin’ny lafin-tany sy ny vahoaka Malagasy, ny eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka, ary ny eo amin’ny fitsaràna sy ny vahoaka. Izany dia tanjona apetraka mba hahazoana vokatra maharitra.
Tsapa ihany koa hoy ny Praiminisitra fa mahantra sy tsy mandroso ny Faritra : marefo ireo fotodrafitrasa ; maro ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany nefa toa tsy hita izay fampandrosoana entiny ; ny Faritra rahateo azo lazaina fa tara amin’ny resaka indostria. Noho izany hoy izy dia mila heverina ny hampandroso ny Faritra. Noresahiny araka izany ny fitsinjaram-pahefana : efa nomena fahefana amin’ny alalan’ny governora ny Faritra, hoy izy, mba hanapa-kevitra ny amin’izay zavatra tena ilainy manokana sy amin’ny famahàna ny olana miseho, satria sarotra ho an’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny fitondràna foibe ny mahafantatra ny tena zava-misy amina toerana iray ao anaty Faritra iray. Ary tsy ampy hoy ihany ny Praiminisitra ny ampahana fahefana ananan’ny tompon’andraikitry ny Faritra fa misy koa ny tetibola tantanin’izy ireo ho fananatanterahana ny vina ampandrosoana ny Faritra, saingy hapetraka ny rafitra hanara-maso ny fampiasam-bola ary hohatsaraina ny fahaiza-manaon’ireo mpitantana. Hanamarinana izany dia nambaran’ny Praiminisitra fa maro ireo tompon’andraikitra nampiandraiketina tetibola hanorenana sy hanarenana fotodrafitrasa saingy tsy nisy voatsangana anefa izany, ary izay indrindra no tandrevaka avy amin’ny kolikoly mahatonga ny fahalovana ankehitriny.
Manoloana izany rehetra izany dia mila ovaina tanteraka hoy ny Praiminisitra ny toe-tsaina, ary tokony hijery ny tombon-tsoam-bahoaka ny tompon’andraikitra rehetra mba hahafahana mampandroso ny Faritra eran’i Madagasikara. Lalan-kevitra hafa mihintsy, hoy ihany izy, no apetrak’izao fitondram-panjakana izao amin’ny fanatanterahana ny politika ankapoben’ny fanjakana. Ohatra amin’izany ny fanorenana sekoly vaovao fa tsy ny fanamboarana izay fotodrafitrasa nisy teo aloha intsony, nohon’ny zavatra takian’ny fandrosoana ; eo koa ny hametrahana « Centre Hospitalier de Référence de District » isaky ny distrika, mba tsy hamonjen’ny olona ny renivohi-paritra rehefa misy ilàna fitsaboana. Ohatra iray hafa ihany koa, eo amin’ny fampidirana mpiasam-panjakana vaovao, dia tokony ho any amin’ny Faritra misy azy izy ireny no manatanteraka ny asany, satria raha raisina ohatra ny momba ny asa fampianarana dia matetika hita fa tsy mizara eny anivon’ny Faritra ireo mpampianatra ka tsy ampy isa ary ny vokany dia tsy mandeha ny fampianarana ka tsy tafita ireo ankizy dia mirona amin’ny fanaovana asan-dahalo.
Raha fehezina izay rehetra izay, hoy ny Praiminisitra, dia hitondra fanavaozana be dia be eto amin’ny firenena ny fitondram-panjakana ka ilaina ny fiovan’ny toe-tsain’ny rehetra ary takiana amin’ny tompon’andraiki-panjakana sy olom-boafidy ny fahamendrehana. Ho an’ny filaminam-bahoaka manokana dia nomarihiny fa isika samy Malagasy ihany no mahatonga ny tsy fahatomombanana ka fotoana izao, hoy izy, hanomezana lanja ny soatoavina izay tsy niaintantsika hatrizay, ary inoana fa hahitàna vokatra ho reharehan’ireo taranaka ny fampandrosoana irosoantsika ankehitriny.
← Fidinana tany Anjozorobe
Fidinana tany amin’ny faritra SAVA →